ချစ်ခင်လေးစာရပါသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ ။ဗုဒ္ဒဘာသာလောကမှာ ဆုပေးတာတွေ မကြာမကြာ ကြားရတာတစ်ခုက သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ် မြတ်ဖြစ်ပါစေတဲ့၊ ဘာလုပ်တာ ကိုသာ သနာပြုတယ်လို့ခေါ်ပါသလဲ၊ဘယ်သူတွေ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်သွားကြပါသလဲ။ လက်လှမ်းမှီသလောက်လေ့လာ
တရားအားထုတ်စဉ် ထားရှိရမည့် သဘောထားများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားစခန်းတွေ တရားရိပ်သာတွေ တခုပြီးတခု ပေါ်လာပြီး တရားထိုင်တဲ့ ယောဂီတွေ အရင်ခေတ်ကထက် ပေါများ လာလို့ ထေရ၀ါဒ သာသနာ ပြန်ထွန်းကားလာတယ် လို့ ၀မ်းသာမလို့ လုပ်တုန်း တခါတခါ ဖတ်မိတဲ့ သတင်းများ ကြားရတဲ့ အကြောင်း များက ဘုရားတောင် တ မိရပါတယ်။
တရားဘယ်လောက် ကြာကြာ ထိုင်နိုင်သလဲ ပြိုင်ပွဲ တဲ့ ဘုရား ဘုရား။ ပြိုင်တယ် ဆိုတည်းက နိုင် ချင်တဲ့ လောဘတွေ ရှုံးမှာ စိုးရိမ်တဲ့ ဒေါသတွေ သူတပါး ကိုယ့်ထက် သာမှာ မနာလိုတဲ့ မစ္ဆေရိယတွေ အကုသိုလ် ကိလေသာ စိတ်တွေ ထကြွ သောင်းကျန်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်း။ တရားပြ ဆရာတော်က ဘာလို့ ဒါတွေ သတိမထားမိပါလိမ့်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် တရားရ ရင်တောင် ရကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောတာကို ဆရာတော်ကြီးများ မလုပ်ကြပါဘူး။ သူတပါးက ပြောလာရင်တောင် မပြောဖို့ တားမြစ်ပြီး အေးအေး စံတော် မူကြပါတယ်။
လောကမှာ ကုန်အောင် လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကုန်အောင်လုပ်တဲ့
အထဲမယ် မြတ်စွာဘုရားက တဏှာကို ကုန်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ တဏှာသင်္ခယ သုတ္တန်ဆိုတာ
ဟောထားပါတယ်။ လူတွေမလိုချင်တာက ဒုက္ခ၊ အဲဒီ မလိုချင်တဲ့ ဒုက္ခကို ထုတ်လုပ်နေတာ
အရိယာဖြစ်သော ရဟန်းတော်များ အာပတ်သင့်ပါသေးသလား?။
ပရိဝါပါဠိတော် ၂၁၄- ၌ -
"ဒွေ ပုဂ္ဂလာ အဘဗ္ဗာ အာပတ္တိံအာပဇ္ဇိတုံ ဗုဒ္ဓါ စ ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ စ " သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့်
ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားတို့သာလျှင် အာပတ်မသင့်ဟု ဆိုသောကြောင့် သာဝကဖြစ်သော ရဟန်းတော်
ဓုတင်အကျင့်ကို လူပုဂ္ဂုလ်များ ကျင့်လို့ရပါသလား
အမေး။ ။ အရှင်ဘုရား….တပည့်တော်ကြားဖူးတာပြောရရင် ဓုတင်အကျင့်ဆိုတော ရဟန်းသံဃာတော်များသာ ကျင့်ရတဲ့အကျင့်လို့ ကြားဖူးပါ တယ်ဘုရား။ အခုခေတ် လူတွေကပါ ဓုတင်အကျင့်တွေကို ကျင့်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်သိချင်တာက ဓုတင်အကျင့်များကို လူတွေပါ ကျင့်လို့ရသလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ကရုဏာရှေ့ထား ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:14 PM No comments:
နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ အတွေ့အကြုံ (ဒေါက်တာအရှင်ဣန္ဒက)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (Language) ပြဿနာပါဘဲ။
၁) ဇာတိမာန် - ငါက မင်းမျိုး၊ သူဋ္ဌေးမျိုး၊ ကောဏ္ဍညအနွယ်၊ အာဒိစ္စအနွယ် စသည်ဖြင့် မာန်မူခြင်း
၂) အာရောဂျမာန် - ငါ့မှာ ရောဂါ မရှိဘူး၊ ကျန်သူတွေမှာ ရောဂါများလိုက်တာဟု မာန်မူခြင်း
၃) ယောဗ္ဗနမာန် - ငါက နုပျိုနေတုန်း၊ မင်းတို့တော့ မကြာခင် သေရတော့မယ်ဟု မာန်မူခြင်း
မြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ တရားဟောနေတဲ့အချိန် ဘုရားတရားနဲ့ မနီး၊ အလွန်ဝေးလံတဲ့အရပ်၊
သာသနာမထွန်းကားတဲ့ နေရာမှာ လူသွားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် တရားဟောတာ ကြားနာခွင့် မရတဲ့
အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ
၀ိသုဒ္ဓိ (၇) ပါးမှာ==
၁။ သီလ၀ိသုဒ္ဓိ = လူတို့၌လည်း လူတို့အလျောက်၊ ရဟန်းတို့၌လည်း ရဟန်းတို့အလျောက် သီလ
၂။ စိတ္တ၀ိသုဒ္ဓိ = ကမ္မဌာန်းအားထုတ်သဖြင့် အာရုံထင်မြင်၍ ဥပစာရ ဈာန်စိတ်၏ စင်ကြယ်ခြင်း။
၁။ အဇာတသတ်အား အဖေကို သတ်ရန် စေခိုင်းမှု (ပါရာဇိကမကျ)။
၂။ ဘုရားအား သွေးစိမ်းတည်အောင် ပြုလုပ်မှု (ပါရာဇိကမကျ)။
၃။ သံဃာသင်းခွဲမှု တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ဘုရား။ တပည့်တော်စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုကို မေးမြန်းလိုက်တာပါဘုရား။
တပည့်တော်တို့တတွေ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ပါအ၀င် အခြားသော တရားတော်များကို ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ပင် အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ယုံကြည်မှုရှိကြပါတယ်ဘုရား..
၁။ ပံ့သကူ ပုဆိုးကောက်သူသည် ကောင်းနိုးရာကိုသာ ရွေးကောက်သကဲ့သို့ အမူအကျင့် မကောင်းသူဖြစ်မူ နှုတ်ကောင်းသည်ကို ဆင်ခြင်၍ အမျက်ဖြေပါ။
၂။ ရေညှိမှေး တင်နေသော ရေကန်၌ အပေါ်ရေညှိ လှစ်၍
လောက လူတွေဟာ စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာတွေ ရှိကြပါတယ်၊ စိတ်ရဲ့ ပျော်မွေ့ရာမှာ
လူတွေဟာ ဘာနဲ့ပျော်ကြသလဲဆိုရင် သားသမီးရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က သားသမီးနဲ့ပျော်တယ်၊ ပစ္စည်း
ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ ပျော်တယ်၊ ပျော်စရာ အာရုံတွေနဲ့ပျော်တယ်၊ လောကမှာ ပျော်စရာ
ဘုန်းကြီးဆီမှာ ဆွမ်းကပ်ခံနေတဲ့ အငယ်ဆုံးကိုရင်တစ်ပါးရှိတယ်။ ရန်ကုန်ထဲက ကျောင်းတစ်
အဲဒီကိုရင်ကို --- " မင်းဟိုမှာနေတုံးက ဆွမ်းခံသွားလို့ရှိရင် တစ်နေ့ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရသလဲ "
ဆဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩ၀ါဒဆောင်ပုဒ်များ(၂)။
"" သီလကထာ ဒေသနာ""
သီလရနံ့ ၊ မွှေးပျံ့ ကြိုင်စွာ၊
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:05 AM No comments:
ယောဂါဝစရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ သောတာပတ္တိ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်သို့ ဆိုက်ရောက်ပြီဟု သို့မဟုတ် သောတာပန်ဖြစ်ပြီဟု ယူဆယုံကြည်ခဲ့ပါလျှင် မိမိကိုယ်ကို မိမိ အထက်ပါ မှတ်ကျောက်တွင် တင်ကြည့်ပါ။
၁။ ငါသည် ဒုက္ခသစ္စာအမည်ရသည့် အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန် အဇ္ဈတ္တဗဟိဒ္ဓစသည့် (၁၁)မျိုးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် တည်နေသည့်ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါး = ရုပ်နာမ်ပရမတ် ဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ကို သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့် ကိုယ်တိုင်မျက်
မှောက် ထွင်းဖောက်သိမြင်ပြီးပြီလား? အချိန်မရွေး ပြန်ရှုလို့ ရပြီလား?
၂။ အတိတ်အကြောင်းသမုဒယသစ္စာကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်အကျိုး ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံ?
ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းသမုဒယသစ္စာကြောင့် အနာဂတ်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်ပုံဟူသည့် ကြောင်းကျိုးဆက်နွှယ်မှု = ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သဘောတရားတည်းဟူသော သမုဒယသစ္စာတရားတို့ကို သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့် ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက် ထွင်းဖောက် သိမြင်ပြီးပြီလား? အချိန်မရွေး ပြန်ရှုလို့ ရပြီလား?
၃။ အကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားများ အကြွင်းအကျန်မရှိ ကုန်စင်အောင် ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့် အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ အကြွင်းအကျန်မရှိ ကုန်စင်အောင် ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်း နိရောဓ သစ္စာတရားကိုလည်းကောင်း, အသင်္ခတဓာတ် အငြိမ်းဓာတ် နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော လောကုတ္တရာနိရောဓ သစ္စာတရားကိုလည်း
ကောင်း သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့် ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက် ထွင်းဖောက်သိမြင်ပြီးပြီလား? အချိန်မရွေး ပြန်ရှုလို့ ရပြီလား?
၄။ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်း ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့် လောကီမဂ္ဂင် တရားကိုယ်(၈)ပါး, လောကုတ္တရာမဂ္ဂင် တရားကိုယ် (၈)ပါးတို့ကို သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့် ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက် ထွင်းဖောက် သိမြင်ပြီးပြီလား? အချိန်မရွေး ပြန်ရှုလို့ ရပြီလား?
ဤမေးခွန်းတို့ကို မိမိကိုယ်ကို မိမိ မေးကြည့်ပါ။ မသိသေးပါ, ရှုလို့မရပါဟု အဖြေထွက်ခဲ့လျှင်ကား မိမိကိုယ်ကို မိမိ နားလည်သင့်ပေပြီ။ သို့သော်သံသရာခရီး အဆုံးဖြစ်သည့် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိသွားတော်မူကြသည့် အရိယာ သူတော်ကောင်းတို့သည်ကား ယင်းမေးခွန်းအရပ်ရပ်တို့ကို ကောင်း-စွာ ဖြေဆိုနိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပေသည်။
နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ အတွေ့အကြုံ (ဒေ...